19 – Bebe mahay mitomban-dahy
Voalaza fa hoe Ramorabe no fiantsoan’ny olona an’i Bebe, ary marina izany fa mahalana izy vao mba hita mikapo-janaka. Na izany aza anefa, olona mahay mihenjana sy mahay manafay tahaka ny lehilahy ihany koa izy rahefa misy ilàna izany.
Indray mandeha, nisy fahadisoana niarahan’i Nenifara Jeanne sy Dadatoa Donné nanao. Tsy tadidy intsony hoe inona ilay fahadisoana fa ny tena tadidy dia niara-voasazy izy mianadahy. Tsy kapoka anefa no sazy fa nasaina nandohalika tao ambany latabatra nandritra ny fotoana maharitra. Harivariva efa manopy maizina tamin’izay. Tsy mbola nisy jiro elektrisite moa ny trano tamin’izany fa labozy no manazava ny isan’efitra. Sendra tonga namangy tao Ankadifotsy indrindra ry Dadatoa Rabenja mianakavy tamin-dry zareo mbola nipetraka tao Ambaniandrefana. Niditra ny efitrano ny vahiny dia nitopy teny ambany latabatra ny masony. “Ary fa maninona angaha ireo ambany latabatra ireo ?” hoy ny fanontaniana napetraky ny vahiny tamin’i Bebe. – “Voasazy ireo fa maditra”, hoy ny valin-teny hentitra voaray. Hita ho nahatsiaro menatra tokoa izy mianadahy na dia mbola kely aza tamin’izany fotoana izany ; menatra ny vahiny. Dia fay !
Tamin’ireny raharahan’i 1947 ireny dia tena nampiseho herin-tsaina sy nitomban-dahy tokoa i Bebe.
Nodonin’ny miaramila Senegaly indroa alina misesy ny trano Lot IVL 16 tamin’izany ; daka mafy be izany à ! fa tsy dondòna moramora akory ; mila ho vaky mihitsy ny varavarambe. Natao couvre-feu mantsy ny tanàna Antananarivo fa hoe : mikorontana ny tany, ka manomboka amin’ny 9 ora alina, tsy misy mahazo mivoaboaka intsony sady tsy misy mahazo mandrehitra jiro intsony koa isan-trano, sao misy mivory alina any ho any mikononkonona hanao zavatra hafahafa ho fanoherana ny Fitondrana.
Tamin’ny alina voalohany, i Nenitoa Ralisy moa manomana fanadinana fa hanala CESD, diplaomam-panjakana anisan’ny ambony tamin’izany andro izany : Certificat d’Etudes du Second Degré. Revo manao famerenan-desona (revision) eo izy. Ny rehetra efa matory ; izy mbola eo ihany. Tsy tsaroany fa efa dila ela ny tamin’ny 9 ora alina. Velona amin’izay ny “dò, dò, dò”, daka sy toto vodibasy atao amin’ny varavarambe io, sady miborediredika ao ivelan’ny trano ao ny miaramila Senegaly maromaro. Efa notampenana lamba maintimainty avokoa na varavarambe na varavarankely nefa dia mbola mitaratra any ivelany avy amin’ny makarakara amin’ny varavaran-kazo ka hita fa misy jiro mirehitra ao an-trano. Dia tsy nisalasala tokoa ny Senegaly nahazo baiko fa avy dia nandona.
Tamin’ny alina faharoa indray, efa nidify ela koa ny tamin’ny 9 ora alina. I Benjamin Charles irery no matory ao ambany rihana ao amin’ny efitra avaratra tamin’izay fa ny rehetra namonjy fandriana any ambony rihana avokoa noho ny tahotra ; i Benjamin Charles io (rain-dry Charlys etsy Manakambahiny) no ilay voalaza arý aloha fa anisan’ny nipetraka tao Ankadifotsy. Nolazainy fa tsaroany ho nangidihidy, hono, ny tongony tamin’io fotoana io ka nandrehitra labozy izy hitsilovany azy. Tsitapitapitr’izay, injao indray ny “dò, dò, dò,” amin’ny baotin-kiraro mbamin’ny vodibasy ; tena mafy dia mafy, mbola mafy noho ny tamin’ny omaly.
Horohoro no nahazo ny iray trano nandritra ny in-2 alina nisesy. Lasa mitsaitsaika moramora ao anatin’ny aizina ao ireto ankizy, sady mitsapatsapa manara-drindrina mitady izay misy an’i Bebe no miezaka manatona azy ao avara-patana ambony rihana, no velon-taraina moramora hoe : “Aiza i Mama ? Aiza i Mama ?” Dia samy mipololotra mivavaka ao am-po na amim-peo malemilemy sy mifitsaka manodidina an’i Bebe eo mandritra ny ora iray any ho any na mahery, mandra-pandehan’ireo miaramila Senegaly manalavitra ny trano. Alaovy sary an-tsaina izany Bebe mitomban-dahy irery ao anatin’ny aizina ao, mankahery tena fa itangoronan’ny ankizy iray trano mangitangitaky ny tebiteby ! Hahatsiarovana ny reniakoho mambomba ny zanany rehetra ao ambany elany rahefa mahita papango misodisody eny ambony eny ! Dadatoa Rasoanaivo amin’izany sady mangovitra no miteny hoe : “Aza misy matahotra ianareo, fa raha tafiditra eo ny miaramila Senegaly, dia izaho no hanolo-tena hotifiriny ho faty hisolo anareo rehetra !” fa izy moa no zokiny indrindra tamin’ny ankizy. Kanjo kosa mba tsy nibosesika niditra tao an-trano ireo miaramila Senegaly izay nohafaran’ny Fanjakana Frantsay mpanjanatany tamin’izany fotoana izany mba hiaro sy hanampy ny “colons” ary hitandro ny filaminana, hono.
Ny ampitson’io alina faharoa io, tsy nahatsindry intsony i Bebe fa lasa nifampiraharaha tamin’ny tompon’io trano atsimo io. Ramatoa atao hoe : Ra-Denise no tompony tamin’izay. Niangaviana izy mba hahazo matory ao amin’ny tranon-dry zareo aloha isaky ny alina mandra-paha… fa tsy tanty izany kotabain’ny Senegaly isan’alina izany sady, sanatrian’izany, sao vaky eo tokoa ny varavarambe (izay voatery nohamafisina tsy satry) raha misy dona fanintelony, dia ho tafiditra ao an-trano ireto miaramila mididididy tava ireto, dia ho asa izay hanjo ! Ho loza !
Nanaiky soa aman-tsara ny fangatahana Ra-Denise ka nisaotsaotra azy fatratra i Bebe. Kinga ery ry Dadatoa Jean-Marie nitaona ny kidoro sy lamba firakotra ary entana vitsivitsy izay tena ilaina fa tsy te-ho tratry ny alina intsony ao amin’ny Lot IVL 16, hono. Dia tany amin’ny efitra farany ambony amin’io trano atsimo io aloha no natory nandritra ny herinandro teo ho eo ; amin’ny antoandro moa dia tsy aiza fa ao amin’ny Lot IVL 16 ihany no mitoetra ; vitaina alohaloha koa ny sakafo hariva dia lasa haingana manao fifindran-tsokina miampita ao atsimo mandany ny alina ao ; dia miverina ao amin’ny Lot IVL 16 indray nony ampitso maraina.
Tazanina avy eny ambony tokoa, avy amin’ny makarakara amin’ny varavarankely fa isaky ny manomboka ny amin’ny 9 ora alina dia indreny miaramila Senegaly maromaro, milanja basy, mifanaretsaka eran’ny tokotany.
Fa momba ity toetran’i Bebe mahay mitomban-dahy ity ihany. Anisan’ny nahatsapana fa manana izay toetra mitombandahy izay tokoa i Bebe rahefa misy ilàna izany, dia tamin’i Dadatoa Donné voakaikitry ny alika chien-loup atao hoe Pataud, tamin’ny taona 1950, raha nanao baolina niaraka tamin’ny namany, fa mbola tokotany malalaka be filalaovan’ny ankizy mantsy tamin’izany iny manoloana ny Lot IVL 16 rehetra iny. Nisy nahafahana kely mihitsy teo amin’ny nofon-tsandrin’i Dadatoa Donné, ilany havia. Toerana mifanalavitra no fiheverana an’Ambatofotsikely misy ny Institut Pasteur sy ny Lot IVL 16–Ankadifotsy tamin’izany andro izany ka voatery handaniana fotoana maharitra raha handehanan-tongotra satria tsy mbola nisy firy ny taxi-ville, ny posiposy aza mahalana vao misy mandalo, ny vonjy aina anefa ilaina maika dia maika satria natahorana hiely vetivety manerana ny tenan’ny voakaikitra ny mikraoban’ny haromotana. Tsy hitan’i Bebe izay atao koa dia nalainy ny anjamby anankiray hitany tao an-trano tao, nodorany ho menanena tsara tao anaty vainafo. Dia nanam-pahasahiana tokoa izy fa iny vy mahamay efa menafify iny no napetany hitsin’ilay faritra voakaikitra fa izay no noheveriny hoe : hamono ny mikraoban’ny haromotana, hono !